Izindaba - Ungayisebenzisa kanjani i-carbide corrugated paper Imimese yokusika ngendlela efanele?
Ungayisebenzisa kanjani i-carbide corrugated paper Slitting Knives ngendlela efanele?
I-1: Ukusebenza okulungile kokulungisa izindwani eziyindilinga ze-carbide kusibambi:
Qinisekisa ukuthi i-carbide corrugated slitter blade igxilile, umphetho wommese awukwazi ukuya kwesokunxele noma kwesokudla noma ugxume phezulu naphansi ngesikhathi sokusebenza.
2:Idivayisi yokulola ummese:
Ukulola ummese kungasethwa ngesandla noma kwenziwe ngendlela oyifisayo. Izinto zesondo lokugaya kufanele zihambisane nezindwani zokucwilisa zikathayela ezihambisanayo, ukuze kufinyelelwe ukulola ngokuphumelelayo, Ukunweba impilo yesevisi yethuluzi.
3:Ithuluzi lokupholisa ithuluzi:
Ngoba ibhodi lekhadi likathayela lisenamazinga okushisa athile lapho lidluliselwa emshinini wokusika, futhi ukungqubuzana nekhadibhodi kubangela i-tungsten carbides i-slitter bladeedge enothayela ukuthi ishise.Lapho izinga lokushisa likhuphuka lifinyelela ezingeni elithile. Ubukhali bommese buyathinteka. Ikhadibhodi elihle likathayela alibukeki kakhulu. Ifakwe idivayisi yokupholisa ingathuthukisa ngempumelelo into engathandeki ye-cut Edge.
4:Gwema iglue ukunamathela emibese
I-glue enamathela emimese izokwandisa ubukhulu bemimese, futhi amakhadibhodi azoba ngaphansi kokungqubuzana okungavamile, okuzodala ukukhiqiza okuphansi futhi kuthinte isikhathi sokuphila. Amaphuzu alandelayo ongayenza ukuze uvimbele lesi simo:
a: Nciphisa ngokufanelekile inani leglue emshinini wokukhiqiza iphepha likathayela.
b:Hlola ukuthi iglue iyasetshenziswa yini esiqongweni sikathayela.
c: Hlola ukuthi indawo yeglue kanye nomugqa weglue inkulu kakhulu.
d: Yehlisa ngokufanele isivinini sokugijima sekhadibhodi, ukuze ingcina iqiniswe ngokuphelele.
I-slitting blade kumele ishunyekwe phakathi kwe-base cutting board ukuze usike amakhadibhodi. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, umkhawulo wokusika akufanele ushumeke esikhaleni ngokujula okungaphezu kuka-10mm.
Thenga ama-premium corrugated slitter blades kumkhiqizi ochwepheshe - i-Zweimentool!
Isikhathi sokuthumela: Aug-23-2021